Toamasina : tsy hitsitsy manoloana ny asan-jiolahy ny polisin’ny Fip | NewsMada
Toamasina : tsy hitsitsy manoloana ny asan-jiolahy ny polisin’ny Fip
Par Taratra sur 25/03/2017
Maro ny ezaka vitan’ny polisin’ny Fip ao Toamasina tarihin’ny kaomisera Rafaliarivo Jules. Ampolony maro ireo jiolahy efa lavo nandritra ny fifanenjehana, manginy fotsiny ireo naiditra am-ponja ao Ambalatavoahangy. Teo koa ireo tambajotran-jiolahy rava…
Ambentintenin’ireo jiolahy ny milaza hoe aza tratran’ny polisin’ny Fip ihany. Taorian’ny namindran-toerana ny kaomisera Rafaliarivo Jules tany Fianarantsoa, tsy nitsahatra nanao fangatahana teo anivon’ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka ny solontenam-pokonolona isam-pokontany ao Toamasina ny hamerenana azy indray ao an-toerana. Ankoatra izany, eo koa ny hafainganany sy ireo polisin’ny Fip miaraka aminy raha misy olona mila vonjy taitra sy famonjena haingana amin’ny afitsoky ny asan-jiolahy.
Ny taona 2008 voatendry hisahana fibakoana ny Fip ao Toamasina izy saingy nafindra toerana tany Fianarantsoa ny taona 2014 ka hatramin’ny volana aogositra 2016. Noho ny fangatahana, araka ny voalaza etsy ambony, naverina niasa ao Toamasina indray izy. Raha ny teo anivon’ny asan’ny polisin’ny Fip mivaingana kosa noho ny fiatrehana ny asan-jiolahy, nahatratra 49 jiolahy lavon’ny balan’ny Fip ny taona 2008 ka hatramin’ny 2014 tao Toamasina. Dahalo miisa efatra kosa tao Fianarantsoa, ny taona 2014 – 2016 ary nahatratra fito indray ireo jiolahy voatifitry ny Fip taorian’ny fiverenany ao Toamasina. “Tsy hitsitsy manoloana ny asan-jiolahy ny Fip satria ny vahoaka sy fananany no tsy maintsy arovana”, hoy ny fomba fiteniny.
Mampiavaka ny kaomisera Rafaliarivo Jules ny fahasahiany tsy mandray kolikoly sy mandray fanelanelanana ataon’ny olona ambony na mpanam-bola raha misy olona hosamborina. Raha misy jiolahy voasambotra ka misy manao fanelanelanana aminy ny mba hamotsorana ireny jiolahy ireny. Jiolahy zanaka jeneraly iray ao Toamasina no efa nifampitifitra taminy ka nahavaky ny fitaratry ny fiaran’ny Fip sy nahavoatifitra polisy iray tao anaty fiara. Maro ny fanafihana efa vitan’ity jiolahy zanaka manambonahitra ity.
Mampitandrina ireo jiolahy ny polisin’ny Fip…
Hentitra ny fanambaran’ny lehiben’ny Fip ao Toamasina amin’ireo jiolahy mbola miseho hanohy ny asa ratsiny fa tsy hitsitsy ny polisin’ny Fip. Nohamafisin’ny lehiben’ity Hery vonjy taitran’ny polisy ity hatrany fa tsy hikely soroka manoloana ny asan-jiolahy izy ireo.
Nambaran’ny filohan’ny fikambanana sosialin’ny Fip, ny inspektera Rakotomalala Romul Dominique, fa efa 19 taona no nisian’ny fikambanan’ny sosialin’ny Fip ary mijoro ara-panjakana izany ka ny fifanotronana na amin’ny tsara na amin’ny ratsy ny tanjona mba tsy hisian’ny miraviravy tanana manoloana ny fahavoazana mety hitranga eo amin’ny polisy eo am-panatanterahana ny asany sy ny vady aman-janany.
Fanadihadiana : Sajo sy J.C /Sary : Sajo